रेडियो शिक्षणमा बजेट सक्ने होडमा कञ्चनपुरका तीन स्थानीय तह !
कञ्चनपुरका तीन स्थानीय तहले लकडाउनले घरमै रहेका विद्यार्थीहरुलाई बैकल्पिक विधि (रेडियो शिक्षण) को माध्यमबाट पठनपाठन थालेका छन् । तर यसरी गरिने पठनपाठन प्रभावकारी नहुने बरु अनावश्यक बजेट सक्ने माध्यम मात्रै बन्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन् । लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भए पछि बैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट स्थानीय तहहरुले शिक्षण सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
कञ्चनपुरका स्थानीय तहले पनि लकडाउनले शिक्षण संस्था बन्द भए पछि घरमै रहेका विद्यार्थीहरुलाई बैकल्पिक विधिको माध्यमबाट शिक्षण–सिकाईमा जोड्न थालेका हुन् ।
कञ्चनपुरका तीन स्थानीय तहले बैकल्पिक प्रणाली रेडियो शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छन् । तर यो कार्यक्रम एकोहोरो भएर विद्यार्थीमाझ प्रभावकारी नहुने र बजेट सकाउन मात्रै हुने भन्दै प्रश्न उठेको छ
। ‘बैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने भनेर रेडियोबाट पढाउन थालिएको छ तर श्रव्य माध्यमबाट मात्रै शिक्षण गर्नु प्रभावकारी देखिदैन । बरु टेलिभिजनबाट श्रव्यदृश्य दुवै हुने भएकाले रेडियो भन्दा केही प्रभावकारी मान्न सकिन्छ ।’ लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध एक शिक्षकले भने ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा तीन स्थानीय तहले लाखौँको लगानी खर्चेर कञ्चनपुरका सात वटा रेडियोबाट कक्षा १ देखि १० सम्मको श्रव्य पाठ प्रसारण थालिएको हो ।
‘बजेट सिध्याउने काम’
रेडियो शिक्षण कार्यक्रम स्थानीय तहको बजेट सक्ने खेल मात्रै भएको विद्यार्थी नेताहरुको विश्लेषण छ । बैकल्पिक विधिका रुपमा यहाँका स्थानीय तहले अगाडि सारेको रेडियो शिक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
यो कार्यक्रमले अनावश्यक बजेट खर्चेर आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पाल्ने मात्रै गर्ने अनिरास्ववियु कञ्चनपुरका विद्यार्थी नेता कमल रोकायाले बताए ।
‘रेडियो शिक्षणको प्रभावकारिता देखिदैन । कथा, उपन्यास लगायत भाषिक बिषय त पढाउन सकिएला । तर गणित, बिज्ञान लगायत प्राक्टिकल तथा हिसाब गरेर देखाउनु पर्ने बिषय कसरी पढाउने ? त्यो सम्भव नै छैन ।’ उनले भने, ‘यो अनावश्यक रुपमा बजेट सक्ने काम मात्रै हो ।’
रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने बाहेक कुनै तुक नरहेको विद्यार्थी नेता तथा अनेरास्ववियु जिल्ला कार्य समिति सदस्य कैलाशचन्द्र गिरीको तर्क छ ।
‘१० दिनका लागि कार्यक्रम बनाएर पैसा सक्नु र एफएमहरु पाल्न बाहेक कक्षाको कुनै आउटपुट देखिन्न । कथा, कहानी जसरी गणित बिज्ञान पढाए कसरी सम्भव होला ? ।’ उनले भने, ‘लगानी गरिसके पछि केही उपलब्धी हुनु पर्छ, तर रेडियो कक्षामा त्यो केही देखिन्न ।’
विद्यार्थी र अभिभावक अनविज्ञ
कञ्चनपुरका सात वटा एफएम/रेडियोबाट श्रव्य पाठ प्रसारण भइरहेको भए पनि विद्यार्थी र अभिभावकहरु भने यस बारे अनविज्ञ छन् ।
लकडाउनका कारण विद्यालय जान नपाएर घरमै थन्किएका विद्यार्थीलाई बैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षणमा जोड्न रेडियोबाट पठन पाठन सुरु भए पनि अभिभावक र विद्यार्थीहरु यस बारे जानकार छैनन् ।
यसले पनि रेडियो शिक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । रेडियोबाट पठनपाठन भइरहेको बारे आफुलाई केही जानकारी नभएको भीमदत्त नगरपालिकाका कृष्ण भट्टले बताए ।
‘मलाई त यसबारे केही जानकारी छैन्, अहिले तपाईबाट नै थाहा भयो ।’ उनले भने । कति बेला कुन बिषयको पढाई बारे आफुलाई जानकारी नभएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थी पुष्कर नाथले सुनाए ।
‘रेडियोबाट पढाउछन् त सुनिएको छ तर कुन बेला पढाउँछन् त्यस बारे जानकारी छैन्, अहिलेसम्म मैलेँ सुनेको छैन् ।’ उनले भने । रेडियोमा पढाएको सुनेको बताउँदै भीमदत्त नगरपालिका एक विद्यार्थी तोरण चन्दले भने, ‘केही बुझिदैन्, सर सर ति पाठ पढे झै गर्नुहुन्छ । केही टिपोट गरौँ भने नि सकिदैन । त्यो सुन्नु भन्दा त स्वध्ययन गर्न जाती छ ।’
उता रेडियो सिकाईका कक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना प्रशारण भइरहेको स्थानीय तहको दाबी छ ।
भीनपाको ४ लाख बजेट, ५ रेडियोबाट शिक्षण
भीमदत्त नगरपालिकाले सोमवारदेखि रेडियो शिक्षण कार्यक्रमबाट श्रव्य पाठ प्रसारण थालेको हो ।
बैकल्पिक शिक्षणका लागि केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त ४ लाखको बजेटमा भीमदत्त नगरपालिकाले महेन्द्रनगरका पाँच रेडियोसंग सम्झौता गरेर पढाई सुरु गरेको हो ।
कक्षा ५, ८ र १० का सबै बिषयलाई पाँच वटा रेडियोबाट अध्यापन गराउन सुरु गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताए ।
उनका अनुसार रेडियो शिक्षण कार्यक्रमका लागि महेन्द्रनगरमा रहेकाका झिलिमिला, राष्ट्रिय, शुक्लाफाँटा, बाह्रसिंगा र महाकाली एफएमबाट शिक्षण गराउन थालिएको छ ।
रेडियोमा शिक्षणका लागि ३५ जना शिक्षक राखिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकामा पाँच वटा रेडियोबाट एक दिनमा १५ पिरियड (घन्टी) अर्थात साढे सात घण्टा पढाई हुने छ ।
आधा–आधा घण्टाको पिरियड छुट्याइएको छ । एक रेडियोलाई प्रतिघण्टा रु. दुई हजार र शिक्षकलाई प्रति पिरियड/प्रति दिन रु ५ सय उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम अहिले असार महिना (१० दिन) सम्म मात्रै सञ्चालन हुने र पछि यसको प्रभावकारितालाई दृष्टिगत गर्दै अगाडी बढ्ने शिक्षा शाखा प्रमुख जोशी बताउँछन् ।
‘विद्यार्थीहरु खाली घरमा रहेकाले केही भए पनि अवधारण लिउन भन्ने उद्धेश्य साथ कार्यक्रम चलाइएको हो । यसमा अभिभावकहरुले पनि आफ्ना नानीबाबुलाई सुन्न प्रेरित गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।
रेडियो शिक्षणको सट्टा अन्य कुनै बिकल्पमा नभएकाले कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले बताए । ‘विद्यालयमा पढाएको जस्तो नभए पनि अवधारणा दिने किसिमको हुनसक्छ ।’ उनले भने, ‘ रेडियो कक्षाकोठा नभई विकल्पमात्र हो ।’
कक्षा लाइभ, रेकडिङ र घरबाटै (फोन) को मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले दुई हजार बढि विद्यार्थी रेडियो शिक्षण कार्यक्रमबाट लाभाम्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरेको छ । सोही अनुसार रेडियोबाट पठनपाठन भइरहेको हो ।
महाकाली नगरपालिकामा ३ लाख, एक रेडियोसंग सम्झौता
महाकाली नगरपालिकाले रेडियोबाट पठनपाठनका लागि त्यहाँको एक रेडियोसंग तीन लाखमा सम्झौता गरेको छ ।
महाकाली नगरपालिकाको स्थानीय जनबोली एफएमसंग रेडियो शिक्षण कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश मिश्रले बताए ।
‘रेडियोबाट पठनपाठनका लागि स्थानीय एफएमलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, सम्झौता भइसकेको छ । केही दिनमा नै कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।’ उनले भने । शिक्षणका लागि शिक्षक/शिक्षिका छनौटमा नगरपालिकाले सघाउने छ ।
रेडियोसंग भएको सम्झौता भएको तीन लाख बजेटबाट नै शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । यो कार्यक्रम पुनः प्रशारण सहित झण्डै ३६ दिनसम्म चल्ने शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताए ।
‘श्रव्य माध्यमबाट गणित सिकाउन गाह«ो भएकाले त्यो बिषय पठनपाठन हुदैन्, सामाजिक, अंग्रेजी र बिज्ञानको कक्षा सुरु गर्ने तयारी छ ।’ उनले भने । कक्षा ६ देखि १० सम्मको पठनपाठन हुने छ ।
शुक्लाफाँटाको एक लाख ५० हजार बजेट
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि रेडियोबाट श्रव्य पाठ प्रसारण थालेको छ । असार ८ गतेदेखि झलारीको प्रभु एफएमबाट शिक्षण सुरु गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख टिकेन्द्र भट्टले बताए ।
यो कार्यक्रम साउन मसान्तसम्म चल्ने छ । रेडियो शिक्षण कार्यक्रमका लागि रेडियोसंग एक लाख ५० हजारमा सम्झौता भएको छ । कक्षा शिक्षण जस्तो रेडियो शिक्षण प्रभावकारी नभए पनि ‘अवधारण’का लागि बैकल्पिक विधिका रुपमा राम्रै हुने दाबी छ ।
आगजनीपछि ठप्प शुक्लाफाँटा–७ को सेवा भोलीदेखि पुनः सुचारु हुने
दैनिक सञ्चार - July 27, 2020 0
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ वडा कार्यालयमा अज्ञात समुहको आगजनीपछि ठप्प रहेको सेवा पुनः सुचारु हुने भएको छ । मंगलवारदेखि वडा...
भीनपा–१६ को वडा कार्यालयमा लागेको ताला खुल्यो
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका –१६ को वडा कार्यालयमा लागेको ताला एक हप्ता पछि खुलेको छ । सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा चिल्ड्रेन पार्क...
जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै इन्टरनेशनल पब्लिक स्कुल
महेन्द्रनगर । कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन भन्दै सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन झण्डै चार महिना पछि खुलेको छ...
वडाध्यक्ष महरामाथी हातपात प्रकरणः वडाबासीले व्यवस्थापन गरिएका पशुचौपाया नगरपालिका पु-याए
महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महरामाथी भएको सांघातिक आक्रमणको विरोधमा वडाबासीहरुले व्यवस्थापन गरिएका छाडा चौपाया नगरपालिकाको कार्यालयमा हुलेका...
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका –१६ को वडा कार्यालयमा लागेको ताला एक हप्ता पछि खुलेको छ । सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै छानविनका...
महेन्द्रनगर । कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन भन्दै सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन झण्डै चार महिना पछि खुलेको छ । कोरोना महामारीकै कारण शैक्षिक...
महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महरामाथी भएको सांघातिक आक्रमणको विरोधमा वडाबासीहरुले व्यवस्थापन गरिएका छाडा चौपाया नगरपालिकाको कार्यालयमा हुलेका छन् । वडाध्यक्ष महराको सक्रियतामा शुक्लाफाँटा...
वडाध्यक्षमाथी हातपात गर्नेलाई रिहाईको माग गर्दै झलारीमा प्रदर्शन, राजमार्ग अवरुद्ध [फोटो फिचर]
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका –८ का वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महरामाथि हातपात गर्नेलाई रिहाइको माग गर्दै झलालरीमा प्रदर्शन भएको छ । नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल तरुण दलले...
दैनिक सञ्चार - February 20, 2020 5
दैनिक सञ्चार - February 21, 2020 6
यातायात कार्यालय कञ्चनपुर: हाजिरी अघिल्लै दिन गरेको पाइयो !
दैनिक सञ्चार - July 23, 2020 0
महेन्द्रनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण थालेको छ । बुधवारदेखि दिनहुँ प्रशासनले मातहतका सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिरहेको हो । बिहिवार जिल्लाका...
सम्पादक: गोकुल जोशी (९८६४६१०९९४)